Firaisan’ireo kandidà : Ho eny amin’ ny hcc androany -
AccueilRaharaham-pirenenaFiraisan’ireo kandidà : Ho eny amin’ ny hcc androany
22/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny famoahan’ireo kandidà ny fanambarana iraisana, nandritra ny fivoriana notanterahin’izy ireo niaraka tamin’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Fantatra izao fa hanatitra ny fanambarana iraisana eny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ireo kandidà androany, ary hiandry ny hevitr’izy ireo. Ireo kandidà rehetra rahateo samy nilaza, fa maro an’isa izy ireo ka tokony hojerena ny fangatahany. Hatreto kosa mikasika ilay nambaran’izy ireo fa “ conference souveraine”, dia mbola miandry ny valitenin’ny HCC. Raha sanatria kosa lavin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny fangatahan’izy ireo, dia fara fahatarany ny alarobia izao no tanterahina ilay “conference souveraine”. Nohazavain’i Fanirisoa Ernaivo mantsy, fa misy ilay “jurisprudence” mipetraka tamin’ny fanapahan’ny HCC milaza fa fifanarahana politika ihany no ahafahana mijery ny zotram-pifidianana. Ireo kandidà izay nanambara, fa avy amin’ny antoko maro isan-karazany izy ireo, ka mahafeno ny fepetra amin’ izay fifanarahana politika izay.
Taorian’ny fivoriana notanterahin’ireo kandidà ny zoma lasa teo, dia nandeha ny resa-be amin’ ny tena zava-mitranga. Ho an’ny mpahay lalàna, izay nantsoina tamin’ ny antso an-tariby Fanahimanana Tiaray, dia nilaza fa tsy manana lanjany araka ny lalàna ny fanapahan-kevitr’ireo kandidà. Satria hoy izy, tsy mahasolo tena ny vahoaka malagasy manerana ny nosy ireo kandidà nanao fanambarana iraisana ireo. Midika izany fa mbola mipetraka ho baraingo hatrany ny hoavin’ ny fifidianana. Miankina betsaka amin’ny fandraisana fanapahan-kevitry ny HCC noho izany ny fiainam-pirenena, ity rafi-pitsarana ambony ity rahateo, izay azo lazaina fa tsy atokisan’ireo kandidà. Hatreto tokoa mantsy dia mbola tsy naharenesam-peo, na fanazavana amin’ny zava-misy ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana sy ny praiminisitra lehiben’ny governemanta. Izy ireo izay samy tsy tonga nanatrika ny fiantsoan’ireo kandidà, nandritra ny fihaonana tetsy amin’ny Ceni.
Voaporofo izao fa tena famitaham-bahoaka fotsiny ny filazana fa tsy te hifanatri-tava amin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina no antony tsy nandehanan-dRajoelina nanatrika ny fandevenana ny filoha teo aloha, Zafy Albert. Hay namidin’ny fitondran-dRajoelina 5 000 fmg/m2 ...Tohiny